Food – Healthy Life Journal
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အောက်ပါအစားအသောက်တွေက ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းအသီးသီးကို ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေကြောင်း လေ့လာမှုအများအပြားအရ သိရှိရပါတယ်။ ဘလက်ဘယ်ရီသီးက ဦးနှောက်စွမ်းအားကို ကောင်းမွန်စေနိုင် သဘာဝအတိုင်း ချိုမြိန်တဲ့ ဘလက်ဘယ်ရီသီးတွေမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေနဲ့ ဗီတာမင်စီတို့ ပါဝင်တာကြောင့် ရောဂါတွေကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်သလို...
သတ်မှတ်ရက်ကျော်တဲ့ အစာစားမိတဲ့အခါ . . .
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ထက် နှစ်လကျော် ရက်လွန်အစားအစာတွေ (ဥပမာ-ဘီစကွတ်၊ ကော်ဖီမစ်၊ အသင့်စားသုံးဖို့ပြုတ်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲ) အစရှိတာတွေကို စားသုံးမိရင် ဘာရောဂါဝေဒနာ ရရှိနိုင်ပါသလဲ။ ကင်ဆာရောဂါရရှိမှာလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ A. အစားအသောက်ကနေ...
ဆေးပညာရှင်တို့ စားလေ့ရှိသည့် ဗီတာမင်ကြွယ်ဝသော အစာများ
———၊ ဇွန် ၊——— ဆရာဝန်တွေ၊ အာဟာရပညာရှင်တွေ အစရှိတဲ့ ဆေးပညာရှင်တွေဟာ သူတို့ဈေးစာရင်းထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အောက်ပါအစာတွေကို ထည့်သွင်းလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ ဘယ်ရီသီးများ ဘလူးဘယ်ရီသီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ဘလက်ဘယ်ရီသီး စတဲ့ ဗီတာမင်၊ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစာတွေကို ဆေးပညာရှင်တွေက တစ်နေ့တစ်ပန်းကန်နီးပါး...
တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် စားသင့်သည့် အစားအသောက် ၁၀ မျိုး
(၁) ထောပတ်သီး ထောပတ်သီးက အာဟာရသိပ်သည်းမှုအများဆုံး အသီးတစ်မျိုးပါ။ (၂) ပဲအမျိုးမျိုး ပရိုတင်းနဲ့ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုများပါတယ်။ အရွက်သုပ်တွေထဲ ထည့်စားသင့်ပါတယ်။ (၃) အဆီနည်းဒိန်ချဉ် အဆီနည်းဒိန်ချဉ်မှာ ပရိုတင်းပါဝင်မှုများပြီး အစာကြေညက်စေပါတယ်။ (၄) အမည်းရောင်ချောကလက် အစွမ်းထက် အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး အသင့်အတင့်စားပေးသင့်ပါတယ်။ (၅)...
အာလူးရဲ့ကျန်းမာရေးအစွမ်း
အာလူးကို ပြုတ်စားတာ၊ ချက်စားတာကြောင့် အောက်ပါကောင်းကျိုးတွေ ရရှိစေပါတယ်။ (၁) အာလူးမှာ ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင် B6၊ ကြေးနီနဲ့ မဂ္ဂနိစ်တို့ ပါဝင်မှုများပါတယ်။ (၂) သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အဆင့်ကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ (၃) အကောင်းဆုံးစွမ်းအင် ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ (၄) နှလုံးအမောဖောက်တာနဲ့...
မစားသင့်တဲ့အချိန်မှာစားမိရင် ဆိုးကျိုးပေးနိုင်တဲ့ အစားအသောက် ၁၂ မျို
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဒီနေ့ခေတ်မှာ အမေရိကန်ရှိ ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးက ဟိုးအရင်ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကယ်လိုရီ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုစားသုံးလာတယ်လို့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ သူတို့အစားအသောက်ကို သိပ်သတိထားပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေတောင် ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ စားသောက်နည်းစည်းမျဉ်းကို အလွယ်တကူ မလိုက်နာဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ အခုဖော်ပြမယ့်အကြောင်းတွေက...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. တချို ့စားသောက်ကုန်တွေမှာ ကြာရှည်ခံအောင် formalin ဆေး အသုံးပြုကြတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒီဆေးဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အလွန်များတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပြီး တခြားအသုံးပြုလို့ရမယ့် ကြာရှည်ခံဆေး ဥပမာ...
နာကျင်မှုကို တွန်းလှန်ပေးမည့် အစာ ၆ မျိုး
ချင်း(ဂျင်း) ချင်းက ဗိုက်အောင့်တာကနေ နှလုံးကျန်းမာရေးပြဿနာအထိ နာမကျန်းမှုအမျိုးမျိုးကို သက်သာစေပါတယ်။ သံလွင်ဆီ သံလွင်ဆီက လေဖြတ်ဝေဒနာနဲ့ တချို့ ကင်ဆာရောဂါအန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်ငါး ဆယ်လ်မွန်ငါးက ခန္ဓာကိုယ်အဆစ်အမျက် ကိုက်ခဲနာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။ ချယ်ရီသီး ချယ်ရီသီးက တစ်သျှူးရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေပါတယ်။ ကော်ဖီ...
ချောကလက်နှင့် တွဲဖက်စားသင့်သည့် အစာများ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ချောကလက်ကို စွယ်စုံရအစာဆိုပြီး အစာတွေကို အရသာရှိအောင် ထည့်စားတတ်သလို သရေစာအဖြစ်လည်း အဓိက စားလေ့ရှိပါတယ်။ ချောကလက်နဲ့ တွဲဖက်စားသင့်တဲ့ အစာတွေရှိပါတယ်။ ချောကလက်နှင့် ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် ပူနွေးနေတဲ့ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်ထဲကို အညိုရောင်ချောကလက်အရည် လောင်းထည့်လိုက်ရင် အရသာရှိစေပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုး...
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေးကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေနိုင်ပေမယ့် အစားအသောက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလို ဘဝနေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံတချို့ကလည်း နှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆာပြေအဖြစ် ကျွန်မတို့စားလေ့ရှိတဲ့ သရေစာတွေကို အဆီအအိမ့်များတဲ့ အစားအသောက်တွေအစား အောက်ပါအစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်စားတတ်မယ်ဆိုရင် နှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင်...